यस्ता अक्षरबाट नाम सुरूहुने मानिस अत्यान्तै विलक्षण स्वभावका हुन्छन,हेर्नुहोस त कतै तपाईको त परेन? – Wow Sansar
यस्ता अक्षरबाट नाम सुरूहुने मानिस अत्यान्तै विलक्षण स्वभावका हुन्छन,हेर्नुहोस त कतै तपाईको त परेन?
यो भनिन्छ कि एक व्यक्तिको नाम को पहिलो अक्षरका आधारमा उसको प्रकृति र व्यक्तित्वबारे जान्न सकिन्छ । यसमा रहेका केही अक्षरहरू प्रभावशाली मानिन्छन् । ए, जे, ओ र एसजस्ता संख्याशास्त्रको आधारमा एक अक्षर १ को बराबर मानिन्छ । ति मानिस जसको नाम एस अक्षरबाट सुरू हुन्छ, तिनीहरु प्राकृतिक रुपमा नेताहरू हुन् ।
Nextकाठमाडौँको तार्केश्वर रामचन्द्रको कोठामा ग्यास पडकियो, बाबुुसहित ६ वर्षीया छोरी रक्षाको अबस्था गम्भिर